असार १० गतेः महालक्ष्मीको प्रिय दिनमा काल बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?| Gandaki Voice
असार १० गतेः महालक्ष्मीको प्रिय दिनमा काल बेला पनि परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
आज मिति २०७९ असार १० गते बिहीबार, इस्वीसंवत जुन २४ तारिक सन् २०२२, शालिवहनीयशाके १९४४, नेपाल संवत् ११४२, नल नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको उत्तरी गोलार्द्धमा छन् । ग्रीष्म ऋतु चलिरहेको छ ।
चान्द्रमान अनुसार आषाढकृष्णपक्ष चलिरहेको छ । सौरमान अनुसार आज आषाढकृष्णपक्षको दशमी तिथि रहनेछ । आज नक्षत्रमा अनुराधा, विष्कुम्भादि योगमा अतिगण्ड, करणमा बब, आनन्दादि योगमा वज्र रहनेछ ।
सूर्य मिथुन राशिमा, चन्द्रमा मेष राशिमा रहनेछ । आज दिनमान ३४ घटि ३६ पला अर्थात १३ घण्टा ५३ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ५ बजेर ११ मिनेटमा विभिषण मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ७ः०१ बजे हुनेछ ।
मेषः आज पनि समय ठीक छैन । जे काम गर्न खोज्यो बाधामात्रै पर्न सक्नेछ । काम गर्ने वातावरण पनि राम्रो नमिल्ने, जता गयो काममा ढिलासुस्ती तपाईंको मन पनि अस्थिर भइरहने छ । आटेका, शुरु गरेका काम थोरै पूरा हुने, धेरै अधूरा रहने छन् । ठूलो लगानी नगर्नु नै वेस हुनेछ । आज जे काम गर्दा पनि विशेष सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वृषः आज पनि समय शुभ रहनेछ, आम्दानीका नया्रँ स्रोत थपिने देखिन्छ । जमिनसम्बन्धी जुनसुकै पेशा अथवा नगदेवालीमा आधारित कामबाट फाइदा राम्रै पाइने देखिन्छ । धार्मिक कार्यक्रमा दिन बित्नेछ । पुराना इष्टमित्र एक्कासी भेट होलान् । आज तपाईं जे चाहनु हुन्छ त्यो काम बन्ने छ, त्यसैले नयाँ व्यवसायमा लगानी आजै गर्नुहोला ।
मिथुनः आज पनि समय मध्यम खालको छ । स्वास्थ्यमा खासै खराबी नआउला । आटेका काम सबै पूरा नभए पनि हतासको अनुभव नगरी लागि पर्दा राम्रो हुनेछ । आज ठूलो लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण छ । त्यसकारण तत्काल पेशा परिवर्तन, ठूलो लगानी, कसैलाई नगद पैसा दिने काम नगर्नु नै वेश हुनेछ ।
कर्कटः आज पनि समय खराब छ । आकस्मिक खराबी आउन सक्ने, आफ्नै रिसको झोंकमा काम बिगार्दै हिंड्ने, औषधि उपचार गर्दा छिटो स्वास्थ्य सुधार नहुने, जताबाट पनि तपाईलाई समय राम्रो छैन । आज सकेसम्म पश्चिम दिशाको यात्रामा नजानुहोला । आज धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नुभएमा ठूलो घाटाबाट बच्न सकिनेछ ।
कन्याः आज पनि समय राम्रै छ । स्वास्थ्यले साथ राम्रै दिनेछ । मनमा फूर्ति र उत्साह बढेकै हुनेछ । काममा जागर बढ्नेछ, नयाँ जागीर खाने ईच्छा भएमा प्रयास गर्नु होस् सफलता मिल्ने छ । कसैलाई नगद धन दिएका भए आज मागे पाइन्छ । तपाईंले आटेका सबै काममा राम्रो सफलता पाइने ज्योतिष भविष्यवाणी दृष्टिकोणमा देखिन्छ ।
तुलाः आज स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ । स्वास्थ्यबारे ढुक्क हुनुहोस् । ठूलो खराबी केही हुनेवाला छैन । तर खान पाइयो भनेर खीर धेरै नखानुहोला । गीत, संगीत, साहित्यलगायत सांस्कृतिक कार्यक्रममा जाने निम्ता पनि पाइनेछ । नयाँ पुराना धेरै मित्रहरु भेट्न पनि पाइने छ । निष्कर्षमा तपाईंलाई आज सबै प्रकारले राम्रो हुन सक्ने देखिन्छ ।
धनुः आज पनि समय अत्यन्तै खराब छ । साना-साना कुरामा पनि शंका र चिन्ता गर्ने देखिन्छ । जहाँ नजानु पर्ने हो बाध्यताले जानै पर्ने, अरु व्यक्तिले दिएको नखानु पर्ने हो तर खानैपर्ने र आफ्नोबारे निन्दा अपमान सुन्नुपर्ने समय छ । तपाईंको काम आफन्त पर्ने व्यक्तिबाट नै बिग्रने देखिनेछ । आम्दानीभन्दा खर्चले जित्ने दिन पनि छ ।
साइतः आज सूर्य मिथुन र चन्द्रमा मीन राशिमा छन् । त्यसैले उत्तर र पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज बिहीबार परेकाले दक्षिण दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ०५ः०८ बजेदेखि ०६ः५२ बजेसम्म चर बेला
बिहान ०६ः५२ बजेदेखि ०८ः३७ बजेसम्म लाभ बेला
बिहान ०८ः३७ बजेदेखि १०ः२१ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान १०ः२१ बजेदेखि १२ः०५ बजेसम्म काल बेला
बिहान १२ः०५ बजेदेखि १ः४९ बजेसम्म शुभ बेला
दिनमा १ः४९ बजेदेखि ३ः३४ बजेसम्म रोग बेला
दिनमा ३ः२४ बजेदेखि ५ः१८ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिउँसो ५ः१८ बजेदेखि ७ः०२ बजेसम्म चर बेला
राहुकाल समयः बिहानमा १०ः०० देखि १२ः०० बजेसम्म राहुकाल अर्थात सबैभन्दा खराब समय रहनेछ । यो समय भित्र यात्रा, लेनदेन, ठूलो लगानी, नयाँ निर्णय केही पनि गर्नु परिणाम राम्रो हुँदैन ।
असार १५ गतेः श्रीकृष्णको प्रिय दिनमा दुई पटक लाभ बेला परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
असार १४ गते : गणेशजीको प्रिय दिनमा औंशी परेको छ, कस्तो होला राशिफल ?
असार १३ गते : आजको दिन अमृत बेलाबाट प्रारम्भ, अमृत बेलाबाटै अन्त्य हुनेछ, कस्तो होला राशिफल ?
असार १२ गते : आजको दिन उद्धेग बेलाबाट प्रारम्भ, उद्धेग बेलामै अन्त्य, कस्तो होला राशिफल ?
असार ११ गतेः आजको दिन काल बेलाबाट शुभारम्भ, काल बेलाबाटै अन्त्य, कस्तो होला राशिफल ?